कुलमान घिसिङले आँखा दान गर्ने घोषणा गरे । हालसम्म ७५ हजारभन्दा बढी दाताकाे दान गर्ने प्रण - Maxon Khabar
Home / News / कुलमान घिसिङले आँखा दान गर्ने घोषणा गरे । हालसम्म ७५ हजारभन्दा बढी दाताकाे दान गर्ने प्रण
कुलमान घिसिङले आँखा दान गर्ने घोषणा गरे । हालसम्म ७५ हजारभन्दा बढी दाताकाे दान गर्ने प्रण
२०७६ पुष १२ – काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले आफ्नाे नेत्र दान गर्ने घोषणा गरेका छन। शनिबार राजधानीकाे तिलगंगा आँखा अस्पतालमा मरणोपरान्त आँखाको नानी दान गर्नेका सम्झना र सम्मानमा गरिएको सामूहिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बाेल्दै उनले आँखा दान गर्नेघोषणा गरेका हुन । साे सभामा उनले भने, 'हामी विद्युत्‌मा अझै आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन, तर आँखासम्बन्धी उपचारमा आत्मनिर्भर छौँ, हामीले लेन्स निर्यात गर्छौं, त्यो देख्दा मलाइ खुसी लाग्छ । बत्तीको उज्यालो देख्न पनि आँखाको आवश्यक पर्ने हुदन आँखा नभइ संसार देख्न सकिँदैन।
साे कार्यक्रममा नेपाल आँखा बैँकको अक्षय कोषस्थापना गरिएको थियो । जसमा विभिन्न व्यक्तिहरुले सहयोग समेत गरेका छन । त्यसैगरी साे कार्यक्रममा ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले भने, 'ट्रमा सेन्टरमा ब्रेनडेथ भएका धेरै बिरामीहरु आउने बताउँदै विभिन्न अंग दान दिएका अरु व्यक्तिले नयाँ जीवन पाउन सक्ने भएकाे हुदा नेत्र गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन । ७ वटै प्रदेशमा डोनेसन सेन्टर बनाइनुपर्छ।
त्यस्तै नेपाल आँखा बैंकका व्यवस्थापक शंखनारायण त्वायनाले नेपालमा आँखा दान गर्न र गराउनका लागि जनमानसलाई सु–सूचित गर्ने उद्देश्यले नेपाल आँखा दान समाज स्थापना भएको बताउँदै सबैलाई आँखा दान दिन आग्रह गरे। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रीता गुरुङले अहिले धेरै मानिसहरुमा देखिएको आँखा दानप्रतिको सकारात्मक सोचको कारणले आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरी पुनःदृष्टि दिलाउने काममा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुँदै गएकाे बताए ।
आँखा दान मृत्यु पश्चात गरिदिने हो जसबाट दुईभन्दा बढी दृष्टिविहीनले पुनः देख्न पाउँछन । नेपाल आँखा बैंकमा हालसम्म ७५ हजारभन्दा बढी दाताले मरणाेपरान्त आँखाको नानी दान गर्ने प्रण गरिसकेका छन् भने झण्डै १५ हजार जनाले आँखाको नानी दान प्राप्त गरी पुनः दृष्टि प्राप्त गरी सकेका छन।